Ajụjụ - OLICOM (JINJIANG) IMP & EXP CO., LTD
Ahịa anyị ga-agbanwe dabere na ọkọnọ na ihe ndị ọzọ n'ahịa. Anyị ga-ezitere gị ndepụta ọnụahịa maka mmelite mgbe ụlọ ọrụ gị kpọtụrụ anyị maka ozi ndị ọzọ.
Ee, anyị chọrọ iwu mba niile ka nwee ọnụọgụ opekata mpe na-aga n'ihu. Ọ bụrụ na ị na-achọ ịmalite
Ọnụ ego mbufe na-adabere n'ụdị ị họọrọ iji nweta ngwongwo. Express na-abụkarị ndị kacha ọsọ ọsọ mana ọ kachasị ọnụ ụzọ. Site na mmiri nke oke osimiri bu uzo kacha mma maka oke. Ghaghị ọnụ ahịa ibu ka anyị ga-enye gị ma ọ bụrụ na anyị maara nkọwa nke oke, ịdị arọ na ụzọ. Biko kpọtụrụ anyị maka ịmatakwu ozi.